Marar dhif ah ayaan la kulmaa qof guuleysta oo aan gadaashiisa wax guuldarooyin musiibo ah qabin. Sanadihii la soo dhaafay, waxaan bartay sida loo qiyaaso guusheyda si ka duwan sida ugu badan. Waan ku guuleystey maxaa yeelay waxaan heystaa 2 caruur ah oo cajiib ah oo aan si aad ah ugu faraxsanahay isla markaana durba muujinaya karti aan sifiican uga sareyn guulahayga da 'ahaan da' ahaan.
Markaan dib u milicsado noloshayda, in kastoo, waxaan aaminsanahay in guushaydu ku timid guul darradayda darteed - inkasta oo ayan ahayn. Waxaan haystaa taariikh qurux badan oo midab leh isla markaana qaatay go'aano badan oo xun, laakiin ilaa 5 sano ka hor ma ahayn inaan joojiyo xoog saarista iyo isku dayga inaan ku horumariyo waxa aan ahaa xun at oo bilaabay inaan ogaado waxa aan ahaa weyn at. Waxaan bilaabay inaan isku hareereeyo dadyowgii igu xukumay oo iga caawiyay hagaajinta xirfadahayga halkii aan ku dhaleeceyn lahaa daciifnimadayda.
Hadda waxaan nasiib u yeeshay inaan ka caawiyo socodsiinta shirkad sii kordheysa oo aan ka caawiyey dhisidda qorshayaashii ganacsi ee asalka ahaa. Wali ma ihi taajir, mana daneeyo inaan sidan ahaado. Qoyskeygu weli waxay ku nool yihiin guri dabaq ah. Lacag kasta oo aan kaga tago mushahar kasta maalin kasta waxay aadeysaa wiilkeyga waxbarashadiisa ama waxaa dib loogu maalgeliyaa howlo cusub. Ilaa iyo inta aan haysto qoys farxad leh iyo saqaf madaxayga ah, waxaan ahay hal nin oo faraxsan!
Pat ayaa isla markiiba shaqadii i galiyay oo dib uma eegin. Waxaan sidoo kale u badalay aragtidayda ku saabsan naftayda iyo qiimahayga ganacsi. Marnaba ma aan ahayn shaqaale mar labaad, oo aan sii wado la shaqaynta iyo shirkadaha noloshayda ku naaxin lahaa inta aan ka shaqaynayey si aan u xoojiyo kooda.
Waxaan kula talinayaa qofkasta oo dhalinyaro ah in sida ugu dhakhsaha badan ee aad u ogaato waxa aad ku fiicantahay iyo sida looga fogaado jagooyinka ama fursadaha aan ka faa’iideysan, sida ugu dhaqsaha badan waxaad uheli doontaa farxad. Farxaddu waxay la timaaddaa guul.